Xakameeyaha Caafimaadka Yurub: Ha u Safrin Jasiiradaha Giriigga!
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Giriigga » Xakameeyaha Caafimaadka Yurub: Ha u Safrin Jasiiradaha Giriigga!
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Wararka Giriigga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Giriiggu wuxuu soo jiitay booqdeyaal aad u tiro badan oo ku yaal 13 jasiiradood, oo ay ku jiraan Mykonos iyo Santorini, oo u dallacsiiyay inay yihiin meelaha “COVID-free” ah, laakiin hadda, u safridda aagga waxaa macno ahaan loo samayn karaa oo keliya halista u gaarka ah.
Dalxiisayaasha ayaa uga digay inay ka fogaadaan Jasiiradaha Aegean.
Kordhinta kiisaska COVID-19 ayaa laga soo sheegay jasiiradaha dalxiiska ee Giriigga.
14 maalmood gudahood, in kabadan 500 oo kiis oo COVID-19 ah ayaa laga helay halkaas.
The Xarunta Yurub ee Ka Hortagga iyo Xakamaynta Cudurrada (ECDC) ayaa uga digay dadka fasaxa u socdaalaya inay u safraan jasiiradaha Aegean ee koonfurta Giriiga kadib markii mas'uuliyiintu ay soo sheegeen inay ku soo bateen kiisaska COVID-19 halkaas.
Greece ayaa soo jiitay tiro badan oo booqdayaal ah oo ku yaal 13 jasiiradood, oo ay ku jiraan Mykonos iyo Santorini, iyaga oo u dallacsiiyay inay yihiin meelaha “COVID-free” ah, laakiin hadda, u safridda aagga waxaa macno ahaan loo samayn karaa oo keliya halista ay leedahay.
Khariidadda socdaalka ee ECDC waa nidaam shan heer leh oo midabka cas ee mugdiga ah-kaas oo ah sida jasiiradaha koonfureed ee Badda Aegean maanta laga rinjiyeeyay-waxay ka dhigan tahay in 14 maalmood gudahood in ka badan 500 xaaladood oo cudurka infekshanka halista ah lagu ogaaday halkaas.
Xeer -ilaaliyaha Yurub: Ha u Safrin Jasiiradaha Giriigga!
Dawladda Giriigga ayaa jasiiradaha u furtay dalxiis gugii 2021 -ka iyada oo rajaynaysa dib -u -dhiska dhaqaalaha maxalliga ah ka dib muddo ba'an oo xannibaadyo socdaal ah.
In kasta oo 31.3 milyan oo dalxiisayaal ah ay booqdeen Giriigga sannadka 2019, tiradaasi waxay hoos ugu dhacday 76.5% illaa 7.4 milyan oo keliya sannadka 2019, sida laga soo xigtay Machadka Ururka Ganacsiga Dalxiiska Giriigga.
Saraakiisha Giriigga ayaan weli argagaxin in kastoo, iyo Manolis Markopoulos, oo ah guddoomiyaha Ururka Hoteellada Rhodes, ayaa sheegay in warshadaha dalxiisku “ay sugayaan in suuqyadu ka falceliyaan” qiyaasta ECDC ee la cusbooneysiiyay ka hor inta aysan ka jawaabin.
Dalxiis kale oo caan ah oo Giriig ah, jasiiradda Crete, ayaa heshay xaalad la mid ah “mid aad u khatar badan” toddobaad ka hor.